Kuwana Wiricheya ine Zvishoma kune Pasina Mari Karman® Mawiricheya
Mawiricheya inogona kudhura. Saka munhu anowana sei a wiricheya nemari shoma? Pazasi pane dzimwe nzira dzaunogona kuwana wiricheya nemari shoma kana kuti isina. Ndokumbirawo kuti murambe muchifunga izvi zvakapusa kutarisa.
Kuti Medicare ibhadhare a wiricheya yemawoko, unofanira kuva mamiriro izvo zvinokutadzisa kufamba-famba mumba mako uye kupedzisa zviitiko zvako zvezuva nezuva. Kuremara kwako haigone kugadziriswa kuburikidza nekushandisa tsvimbo kana Walker uye wiricheya haigone zvinodikanwa chete kuti ushandise kunze kwemusha neimwe nzira, haugone kukodzera.
Kuti zvikwane wiricheya yemagetsi kuti ifukidzwe neMedicare, munhu wacho anofanirwa kuve nezvinodiwa zvakafanana nezve a wiricheya yemawoko, asi havagone kuva ne simba remuviri kuti uishandise. Iwe unofanirwa kuratidza kuti une kugona kudzora mudziyo une simba pasina kuzvikuvadza iwe kana avo vakavakomberedza.
Gwaro rakanyorwa kubva kuna chiremba chinodikanwa neMedicare uye inofanirwa kutaura chikonzero chekurapa nekuda kwekuda kusanganisira iyo mhando of wiricheya ndiko kunodiwa. Kana Medicare ikabhadhara, inovhara nezve 80% yeiyo mutengo unobvumidzwa uye kazhinji kana munhu aine Medicare Supplemental Inishuwarenzi, ivo vanobhadhara iyo yasara makumi maviri muzana.
Yakavanzika Inishuwarenzi Kuvhara:
Kana iwe uine yega inishuwarenzi yekurapa, tarisa kuti uone kana chirongwa chako chichivhara a wiricheya. Nekudaro, marongero mazhinji ehutano hwepachivande haazokupe mahara wiricheya, asi ivo vanozofukidza chikamu che mutengo. Saka tarisa inishuwarenzi yako pasi pechinhu chakasimba zvekurapa.
Kune mamwewo masangano akasiyana anoita kupa wheelchair zvipo kune avo vanoda rubatsiro.
Heano mashoma emasangano iwayo:
Dzimwe nzira muMotion:
Basa ravo "nderekusimudzira kuzvimiririra kuburikidza nekuwana kufamba midziyo. ” Vanga vachibatsira avo vasina inishuwarenzi kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu. Zvisinei, mabasa avo anongogumira kuWest Michigan.
Yakatangwa mu2007, uyu asiri purofiti mudiwa nemaveterans, vanaamai vasina murume, mhuri dzinotambira mari shoma, uye vakuru vanhu vari kuda magetsi kufamba mudziyo munzvimbo yese yeCoachella Valley yeSouth California.
FODAC yakatanga kuvambwa muna 2007. Ivo zvinopa yakasimba mishonga yemakirini zvishoma kusvika hapana mutengo kune avo vakaremara. Nekudaro, ivo havatumire zvinhu uye vanofanirwa kunhongwa kuzvivakwa zvavo zviri muStone Mountain. Saka masevhisi avo anogumira kuAtlanta neGeorgia.
Iyo Yevana Yekushandisa Network
Iyi isingabatsiri chirongwa inobatsira chaizvo vana vane zvakakosha zvido avo zvinoda kugadziriswa midziyo. Ivo vanobatsira vana kusvika zera makumi maviri nerimwe ne kupa michina kumhuri dzisina mari shoma.